ကျမအခုလို စာရေးရတာ၊ မြန်မာစကားများများ မပြောရလို.ပါ။
စကားအလွန်များတဲ.ကျမကို ငယ်ငယ်က ဒေါ်လေးမူက ”ဆိတ်ချီးတစ်ပြည်ဝင်တယ်”လို. အမြဲပြောပါတယ်။ နောက် ပေါင်းခဲ.တဲ.သူငယ်ချင်းတွေက အကုန်လုံးစကားများတဲ.သူချည်းပါပဲ။ ဥပမာ၊ ချို၊ ခိုင်အေး၊ မိုးကျော်၊စုမွန်၊ တို.လိုမျိုးပေါ.။ သူတို.ကိုလည်းသူတို.ရဲ. ကြင်ယာတော်များက အလွန်စကားများတယ် လို.သတ်မှတ်ထားတာပါ။ မယုံရင်သူတို.ကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ကြည့်ပါ၊ ဒါပေမယ့် အချိန်ရမှဖြစ်မယ်နော်။ စမိရင် ဆုံးမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ သူတို.နဲ.တနေရာစီဝေးနေရတော့ ပြောစရာစကားတွေ က သိမ်းထားရတာများလာပြီး နောက်ဆုံတော့ စာအဖြစ်ချရေးလိုက်ရတော့ တာပါပဲ။
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Wednesday, August 12, 2009
Now,i am ok for writing, traveling.